Fomba sy karazana fiakaran'ny marary | JBH Medical
Antsoy izahay: 0086-18913356391
Momba ny JBH
Fomba sy karazana fiakaran'ny marary
Fiasan'ny fiakarana ho an'ny mararin'ny paralysisa:
Ny fifindra-monina miaraka amin'ny fihetsiketsehana tsy mahaliana avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny iray hafa dia afaka mampiakatra ny marary amin'ny tany mankany am-pandriana; ny tongotra chassis dia azo sokafana mba hanakaiky kokoa ny marary; ny kodiarana any aoriana dia manana frein afaka mamaky mba hisorohana ny fampiakarana ny marary rehefa misondrotra ilay marary Mihetsika ary miteraka ratra tsy fantatra amin'ny mpiasa marary na marary. Ny fihirana fametahana dia afaka mihodina fihodinana 360 °, izay ahafahana mandrindra mora foana ny marary amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana iray. Ny antsamotady manokana dia afaka manitsy ny fihetsika, ary ny antsamotady amin'ny loko isan-karazany amin'ny ambaratonga maro dia mety amin'ny mpampiasa manamboatra ny fihetsika. Ny fijanonana vonjy maika dia azo ampiasaina hanapahana ny herinaratra amin'ny fotoana iray lehibe hiarovana ny fiarovana ny mpampiasa sy ny mpianakavy. Mety halefa mora sy haingana ary aforitra mora entina izy io.
Ny fampiakarana finday karazana pedestal dia matetika ampiasaina amin'ny andrim-panjakana na hopitaly. Ampiasaina izy ireo hamindra zavatra toy ny seza sy ny farafara izay ipetrahan'ny zavatra mihetsika na mandry amin'ny fiakarana.
Ny fiakarana ho an'ny tohatra mihetsika dia ampiasaina hanampiana ireo olona tsy mahazo aina mihetsika sy midina tohatra, fa ilay zavatra mihetsika irery dia tsy afaka atao irery. Misy olona tsy maintsy manampy hiantohana ny fiarovana.
Matetika amboarina eo amin'ny tany eo anilan'ny fandriana no amboarina, ary misy andry napetraka eny amin'ny zorony efatra amin'ny efitrano, misy famafazana ahafahan'ny mihetsika mihetsika ao anaty sakelidalana mifindra.
Fiakarana mitaingina lalamby dia fiakarana izay mampihetsika ny zavatra mihetsika mankany amin'ilay kendrena miaraka amina antsamotady eo amina lalamby napetraka eo amin'ny valindrihana. Ny fatiantoka dia ny fametrahana ny làlana mitaky fananganana, ary raha vao apetraka dia tsy azo ovaina ny toerana misy ny làlambe, ary lehibe ny fampiasam-bola, noho izany mila voafantina tsara.
Ny antsamotady dia ampahany ilaina amin'ny fananganana herinaratra. Azo zaraina ho karazana sling, fonon-dasy, karazana tongotra fisarahana (feno, fonon-tany), karazana fidiovana sns ..., ary na dia karazana seza (karazana seza fandroana, karazana seza) sy ny zavatra manokana manokana.
Olona antitra marary mafy, mararin'ny tongotra aman-tànana, tsy mahatsiaro tena na tsy mahazo aina amin'ny hetsika ataon'ny zokiolona, ​​na mandry ao an-trano, any amin'ny trano fitaizana be antitra, na any amin'ny hopitaly, ny fikarakarana fandroana, ny fikolokoloana ny fahalavoana ary ny kalitaon'ny fiainana no olana lehibe. Ho an'ireo marary na zokiolona ireo dia tsy afaka manadio afa-tsy ny fikosehana ny hoditry ny vatana iray manontolo. Ny mpikarakara ao amin'ny hopitaly na ny havany ao an-trano dia afaka mitazona koveta na siny misy rano mafana, mandena azy amin'ny lamba famaohana, ary avy eo manosotra. Satria tsy mety ny mampiasa detergents toy ny savony sy ny fanasana vatana mandritra ny fikosehana, ny fikosehana dia lavitra ny fahadiovana sy ny fandalinana. Indrindra ho an'ny orifice urethral sy anus, ny fahadiovan'ny fikosehana dia tena voafetra. Ny fahatsapana fikosehana koa dia ratsy kokoa noho ny fanasana. Soa ihany fa tsy afaka maneho ny fihetseham-pony intsony ireo marary na antitra ireo. Ho an'ireo marary na zokiolona ireo izay narary efa hatry ny ela ary tsy afaka hikarakara ny tenany dia tsy ratsy ny manampy olona hikosoka matetika. . Noho izany, ireo marary na zokiolona ireo dia mitondra fofona tsy mahafinaritra foana, avo lenta ny aretina mikraoba sy ny bedores, ary ambany dia ambany ny kalitaon'ny fiainana.
Ity karazana fisondrotana ity dia azo ampiasaina amin'ny trano fitsaboana sy trano. Aorian'ny fampiharana ny R&D sy ny famokarana eny an-tsena dia manintona avy hatrany ny fiheveran'ny tsirairay sy ny fankasitrahany azy io, satria ny fiakarana dia mamaha ny olana goavana amin'ny marary mitaiza eo am-pandriana, izay tian'ny marary sy mpitsabo efa antitra. Amin'ny alàlan'ity karazana fiakarana ity dia afaka misasa isan'andro ny be antitra na ny marary, mampihena ny aretin-koditra sy ny lalan-dra amin'ny marary marary am-pandriana sy ny be antitra, manala ny fofona hafahafa amin'ny vatana. Na dia mijanona ela eo am-pandriana aza ianao dia afaka manohy mankafy ny fahafinaretana mandro. Ataovy madio sy maina hatrany ny vatana iray manontolo, manatsara be ny kalitaon'ny zokiolona sy ny marary manana fihetsika tsy mahazo aina.
Fotoana fandefasana: Jul-23-2020
fandriana hopitaly mandeha ho azy, fandriana hopitaly herinaratra, fanary ara-pitsaboana, sarontava vava, farafara fandriana ho an'ny marary, fandriana fikarakarana maranitra,
Karazana fandriana hopitaly
Ny fandriana hopitaly amin'ny ankapobeny dia manondro ny fandriana fitaizana be antitra, izay noforonina arakaraky ny filan'ny marary sy ny fahazarana mipetraka, ary namboarina niaraka tamin'ny mpianakavy mba hiaraka ...
Fiasan'ny fiakarana ho an'ny mararin'ny paralysisa: ny famindrana olona manana fivezivezena manelingelina amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana iray hafa dia afaka mampiakatra ny marary amin'ny tany mankany am-pandriana; azo sokafana ny tongotra chassis ...
Fanasokajiana sy fenitry ny sarontava
Saron-tava fitsaboana azo ampiasaina: saron-tava fitsaboana azo ariana: mety amin'ny fiarovana ara-pahasalamana amin'ny tontolon'ny fitsaboana amin'ny ankapobeny izay tsy atahorana ny tsiranoka amin'ny vatana sy ny fiposahana, mety amin'ny gen ...
fanary ara-pitsaboana, fandriana hopitaly mandeha ho azy, sarontava vava, fandriana hopitaly herinaratra, fandriana fikarakarana maranitra, farafara fandriana ho an'ny marary,